Furista xadka Eritrea & Itobiya oo banaanka soo dhigtay colaada Gaamurtay ee Oromo, Axmaro iyo Tigree. | ogaden24
Furista xadka Eritrea & Itobiya oo banaanka soo dhigtay colaada Gaamurtay ee Oromo, Axmaro iyo Tigree.
Hogaamiyayaasha xukuumadaha Asmara iyo Addis ababa ayaa si rasmi ah u Furay Hal dariiq ama Wado oo Haatan wixii kadambeeya noqonaya, Jidka Kaliya ee dadka Labada dal ay isaga Talaabi karaan ama isaga Gudbi doonaan sharci ahaan.
Dhinaca Eritrea Goobtu waa Omhajer ee Gobolka Gash-barka dhinaca Itobiyana waa Humera oo katirsan mamulka Tigrai, waxaana kala Qaybisa Buundo ay dhinacyada kajoogaan ciidamada Amaanka 2-da dal iyo Hay’adaha socdaalka kuwaasi oo isla shalay ba shaqo bilaabayay sida Qorshuhu ahaa balse shaqaaqo jirta Awgeed dib u dhacay.
Madaxda Itobiyanka ah xaadirtay xuduud Furista waxaa Hogaaminayay Abiy Ahmed waxaana Qayb ka ahaa madaxwaynayaasha Tigreega iyo Axmarada oo colaad Qomiyadeed kadhex Jirto, kuwaasi oo in dhowaale Hawada isu marinayay Hanjabaado iyo Hadalo Xanaf leh.
Kulanku wuxuu kadhacay dhinaca xadka Eritrea oo ay madaxda Itobiyanka ahi diyaarad Helicopter ah kutageen waxaa se soo baxday dareenka cadhada xambaarsan ee shacabka Tigreega, kuwaasi oo mudaharaad ay kudiidan yihiin Abiy Ahmed iyo madaxwaynaha Axmarada Buundada dhinaceeda kala kasameeyay.
Dadka Tigreegu waxay shaki marba marka kadambaysa sii xoogaysanaya kaqabaan xukuumada Abiy Ahmed oo xulafadiisa Axmarada, waxayna taasi keentay inay shalay Hortooda kaga dhawaaqaan waxaa tihiin Tuug mana soo Gali kartaan dhulka Tigreega.
Xafladii Furista xadka Labada dhinac waxay noqotay mid aan u dhicin sidii Qorshuhu ahaa kadib markii sawaxanka iyo Qaylada Tigreega mudaharaadaya ay Hadhaysay, waxaana khasab noqotay in lasoo Koobo xafladii Furista laguna kala tago Goobtii.
Arinta muhiimka ah ayaa ahayd in Abiy Ahmed uu Awoodi waayay inuu dhinaca Itobiya Lug ugu soo Talaabo si uu dadka ula Hadlo uguna sheego in saacadaas wixii kabilawdo uu xadku Furun yahay ayna si xor ah dhinaca kale ugu Talaabi karaan, balse waxaa uu diyaarad kaga duulay dhinaca xadka Eritrea taasi oo muujinaysa Heerka ay Gaadhsiisan tahay colaada kala dhaxaysa dadka Tigreega.